St. Eustatius: Looma karantiili doono Statians-ka la tallaalay
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » St. Eustatius Breaking News » St. Eustatius: Looma karantiili doono Statians-ka la tallaalay
Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Caribbean • Asxaabta eTurboNews • Caafimaadka Warka • Warshadaha Warshadaha • News • Dib-u-dhiska • Waajib ah • St. Eustatius Breaking News • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Sirta Safarka • Warka Safarka Safarka • Wararka kala duwan
Dadka degan Statia ee si buuxda u talaalan uma baahna inay galaan karantiil markii ay galayaan Statia markay u safraan dibada
St. Eustatius wuxuu fududeyn doonaa talaabooyinka karantiilka laga bilaabo Abriil 11, 2021
Dadka degan Statia ee ka soo laabanaya dibada waxay wali u baahan yihiin inay ku jiraan tijaabada PCR-ga oo xun
Tallaabooyinka fududeynta laguma dabaqi karo dalxiisayaasha, xitaa haddii la tallaalo
Hay'adda Dadweynaha ee St. Eustatius waxay fududayn doontaa tallaabooyinka laga bilaabo Abriil 11, 2021. Dadka deggan Statia ee si buuxda u tallaalan uma baahna inay galaan karantiil marka ay soo galayaan Statia markay u safraan dibedda. Qiyaastan fududeynta kuma khusayso dalxiisayaasha.
Go'aanka lagu fududeynayo tallaabooyinka waxaa la qaatay ka dib markii si taxaddar leh loo falanqeeyay ka dib markii aan si ballaadhan ula tashaday Wasaaradda Caafimaadka, Daryeelka iyo Isboortiga ee Nederland (VWS), Machadka Qaranka ee Caafimaadka iyo Deegaanka (RIVM), khabiirka epidemiologist ee Saba, Mr. Koen , Waaxda Caafimaadka Dadweynaha iyo Kooxda Maareynta Dhibaatooyinka ee Statia.
Imtixaanka PRC ayaa loo baahan yahay
Dadka degan Statia ee ka soo laabanaya dibada waxay wali u baahan yihiin in ay ku sameeyaan tijaabada PCR-ga diidmada ah, laakiin tani waxay khuseysaa oo keliya haddii wadan khatar sare leh la booqday. Tijaabad dhakhso leh (antigen) ayaa sidoo kale loo baahan yahay 5 maalmood ka dib marka lagu soo noqdo Statia. Intaas waxaa sii dheer, kala fogaanshaha bulshada iyo xirashada wejiga wajiga ayaa qasab ah 5-ta maalmood ee ugu horreysa ka dib gelitaanka. Sidoo kale, looma oggola inay kaqeyb gasho xafladaha in kabadan 25 qofood oo jooga 5-ta maalmood ee ugu horeysa iyo dadka reer Statians ee soo noqonaya waa inay u hogaansamaan xeerarka nadaafadda maalmahaas sida gacmaha oo si joogto ah loo dhaqo.
Tallaabooyinka fududeynta laguma dabaqi karo dalxiisayaasha, xitaa haddii la tallaalo.
Carruurta dibedda ku maqnayd kana soo noqdeen waddamada halista badan looma oggola inay aadaan dugsi ama xanaanada carruurta 5 maalmood. Carruurta da 'ahaan ku jirta da'da 4 sano ama ka weyn ayaa la baari doonaa 5 maalmood ka dib. Si kastaba ha noqotee, carruurta da'doodu tahay 12 sano iyo ka weyn, tallaabooyin kala duwan ayaa lagu dabaqayaa. Waxay u baahan yihiin inay karantiil galaan markay yimaadaan 10 maalmood. Tan waxaa lagu sameyn karaa isla guriga waalidkood, laakiin qol gooni ah. Farqiga u dhexeeya da 'kooxdan da'da ah waxaa loo sameeyay xaqiiqda ah in carruurta ka weyn 12 sano ay inta badan faafiyaan fayraska' COVID-19 'marka loo eego carruurta u dhexeysa 4 iyo 12 sano.
Booqashooyinka maalinlaha ah ee St. Maarten
Dadka si buuxda looga tallaalay labada qiyaasood ee tallaalka Moderna waxay booqan karaan St. Maarten muddo 1 maalmood ah, iyada oo aan la baarin, isla markaana aan loo baahnayn in la karantiilo marka la soo celiyo Statia. Qiyaastan fududeynta waxay ku habboon tahay oo keliya marka tirada kiisaska firfircoon ee COVID-19 ee ku yaal St Maarten ay ka hooseeyaan 100 usbuucii.
Shaqaalaha soo galaya
Shaqaalaha soo galaya ee la tallaalayo waxaa loo qiimeeyaa kiisba kiis ahaan. Si kastaba ha noqotee, karantiil ayaa loo baahan yahay illaa nooca shaqadu u oggolaato nidaam fudud.
Waqtigan xaadirka ah Hay'adda Dadweynaha ee St. Eustatius waxay ka shaqeyneysaa khariidad waddo oo ay ku jiri doonaan tillaabooyin gaar ah oo lagu sii furayo Statia. Khariidadan dariiqa ah ayaa marka hore lagala hadli doonaa Golaha Dhexe usbuuca soo socda.
Waaxda Caafimaadka Dadweynaha waxay bilaabi doontaa maamulista qiyaasta labaad ee tallaalka Febraayo 22nd, 2021. Ilaa iyo hadda 765 qof ayaa lagu tallaalay qiyaasta ugu horreysa ee tallaalka Moderna, taas oo xoogaa ka badan 30% dadka waaweyn. Waaxda Caafimaadka Dadweynaha ayaa bilaabi doonta maamulista qiyaasta labaad ee tallaalka Isniinta, Maarso 22nd, 2021. Ilaa 765 qof ayaa helay tallaalkii ugu horreeyay, xoogaa in ka badan 30% dadka waaweyn.